Maqaal (Tan oo kale waa nagu dhacdaa): Murankii kabaha ee masjidka – Balcad.com Teyteyleey
Markii laga soo baxay salaaddii Jimcaha ayaa nasiibdarro nin ka mid ahaa dadkii meeshaas ku tukudaya ayaa miyir beelay, waxaana loogu wacay gargaarka degdegga ah. Daqiiqado yar ka dib, waxaabad moodeysay iney nala joogeen oo waaba soo galeen.
Kooxdii gargaarka iyagoo la ordaya sariirta lugaha leh oo qalabkeedu u dhan yahay ayay masaajidka iridka hore ka soo galeen, maxaase dhacay? Qaar ka mid ah dadkii masaajidka hordhoobnaa ayaa qaylo iyo carar isu soo daray iyagoo dhahaya WAR KABAHA….WAR KABAHA…WAR KABAHA BIXIYIA…KABAHA BIXIYA.
Kuwo kale ayaa dhinaca kala ka soo haaday iyagoo leh ” WAR DAAYA WAR DAYAA..WAR DAAYA…QOF BAA TACBAAN AH
Kooxdii ayaa ku wareertay, garan waysayna waxa lagala hadlayo oo waxay moodeen in la leeyahay halkaas maaha ee dhanka kale soo aada.
Aniga markaas uun baan fahmay qaylada iyo muranka, waxaan ka mid noqday war kaba maahee qof baa suuxay oo miyir beelay kabo lala galo masaajidka wax ka xun bay Soomaali sameysaa ee muranka joojiya.
Raggii iyagoon aan sheekadaas sii dhegeysanin bay hawshoodii hore u sii wateen.
Marka hore kooxdaas gurmadka kabaha ay sitaan ee loogu talagalay maba aha kuwo dhaqso ku furma looguna talagalay in la bixiyo markii ay arrintu sidaas taagan tahay, waxay la galaan dabka, waxay la galaan buuraha, waxay la galaan biyaha iyo badaha, suurtgalna maaha iney We’ve got the most cost effective deals for medicines you can find! You can get depakote only for 1.03 USD right away! waqti ku lumiyaan kabo bixin, iyo markii la soo baxay oo qofkii la rabo in lala cararo iney haddana kabo gashtaan, waa inaan caqliga ka shaqaysiinnaa.
Yaa daran badbaadada qofka iyo in KABO in la bixiyo lagu murmo. Tani waxay ku tusineysaa waxa muranka iyo qajajacda aan ka keenno ineyan ahayn mid ku qotonta xaqiiqda iyo nolosha aadaha.
Waxaase nasiibwanaag ah in raggaas ayan dhegeysanin waxa la sheegayo waxa ay yihiin, waxay u yimaaddeen iney qofkaas caawinaan isbitaalkana u qaadaan, inta la sii wadana uu helo naxariis iyo gargaar tuu u baahnaa.
W/Q: Abdulkadir Mursal
Dilal qorsheysan oo xalay ka dhacay magaalada Laas-caanood